Caldes de Montbui, ဘာစီလိုနာမြို့အနီးရှိအံ့ဖွယ်တစ်ခု ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | | စပိန်မြို့ကြီးများ, ယေဘုယျ, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
Caldes က de Montbui မြို့တော်ခန်းမ
မြို့တော် Caldes က de Montbui ၎င်းသည်ဘာစီလိုနာမှ ၃၅-၅ ကီလိုမီတာအကွာတွင်တည်ရှိပြီး၎င်းဒေသ၏အလယ်ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည် Vallés Oriental, အဘယ်သူ၏အရေးအပါဆုံးမြို့ Granollers ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတွင်လူ ဦး ရေ ၁၇,၀၀၀ ခန့်ရှိပြီးလူ ဦး ရေ၏မူလနူကလိယနှင့်မြို့ပြကွဲပြားမှုများအကြားဖြန့်ဝေထားသည်။
Caldes de Montbui ကိုအဓိကအားဖြင့်လူသိများသည် ရေပူစမ်း ၎င်းသည်မြေဆီလွှာ၏အူသိမ်အူမများမှထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အတိအကျပြောရလျှင်ရောမများ၏အားသာချက်ကိုရယူထားသောဤပင်လယ်ကမ်းခြေလှုပ်ရှားမှုသည်လူ ဦး ရေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒီမြို့လေးရဲ့အလှဆုံးမြို့တစ်မြို့ကကာတာလန်းမြို့ငယ်လေးပါ ဘာစီလိုနာအနီး, သင်ကမ်းလှမ်းရန်အများကြီးရှိပါတယ်။ သင့်ကိုပြပါရစေ။
1 အဘယ်အရာကို Caldes de Montbui တွင်ကြည့်ရှုရန်
1.1 Santa María de Caldes de Montbui ၏ဘုရားကျောင်း
1.6 Manolo Huguéပြတိုက်
2 Caldes de Montbui ရှိရာသီဥတု
3 Caldes de Montbui မှာဘာစားရမလဲ
4 Caldes ပွဲတော်များနှင့်အစဉ်အလာ
အဘယ်အရာကို Caldes de Montbui တွင်ကြည့်ရှုရန်
ဤမြို့သည်သင့်အားထင်ရှားသောအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများ၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာများနှင့်လှပသောသဘာဝရှုခင်းများအပြင်ကောင်းမွန်သော gastronomy နှင့်ပျော်စရာနေရာများကိုပေးသည်။ ပထမအချက်အနေဖြင့်၊
Santa María de Caldes de Montbui ၏ဘုရားကျောင်း
၎င်းသည်မြို့၏မြို့ပြinရိယာတွင်တည်ရှိပြီး Puerta de Barcelona နှင့် Royal Palace တည်ရှိရာနေရာအတိအကျရှိသည်။ အမှန်မှာ၊ ၁၆ ရာစုတွင်ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ရန်အုတ်နံရံအချို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော်ယင်း၏အဖုံးသည်ရာစုနှစ်တစ်ခုကြာပြီးနောက်၎င်းကိုအောင်မြင်သောဥပမာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Catalan Baroque.
ဘုရားကျောင်းအတွင်းပိုင်းတွင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ၁၂ ခုရှိသည်။ ဒါပေမယ့်သူကအားလုံးအထက်မှာရပ်တည် သန့်ရှင်းသောဘုရား, ဘိုင်ဇင်တိုင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုပြသထားတယ်တစ်ထိုးဖောက်မှုသစ်သား Romanesque ပန်းပု။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၎င်းသည်မီးကြောင့်ပျက်စီးသည်။
Santa Maríaက de Caldes ၏ဘုရားကျောင်း
၁၅၈၁ ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည် Caldes ၏သင်္ကေတ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရေကိုဂျက်လေယာဉ်ကဒီတိရိစ္ဆာန်ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ပုံရဲ့ပါးစပ်ထဲကထွက်လာလို့ပါ။ စိတ်ဝင်စားစရာကဘယ်တော့မှစီးဆင်းနေတယ်။
ဒေသခံရေ၏နွေးထွေးမှုသို့ပြန်သွားရာဤအရင်းအမြစ်မှထွက်ပေါ်လာသည့်အရည်သည် ၇၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်ရှိသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ရာစုနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောလေ့လာမှုတစ်ခုအရဤရေသည်ဆိုဒီယမ်၊ ဘရိုမိုင်း၊ လီသီယမ်နှင့်အိုင်အိုဒင်းများစွာကြွယ်ဝသည်။ ဒါကြောင့်ရှိပါတယ် အရေးကြီးသောဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများ.
သင်သည်သူတို့ကိုစမ်းရေတွင်းတည်ရှိရာနေရာနှင့်အတူတူပင်စတုရန်းတွင်တွေ့လိမ့်မည် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား၏ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှု။ ၎င်းတို့သည်အလွန်ကျယ်ဝန်းခဲ့သော်လည်းလက်ရှိတွင်ရေကန်တစ်ခုနှင့်၎င်း၏ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိကွင်းများသာရှိသည်။ နှစ်ခုနယ်ပယ်နှစ်ခုနှင့်တစ် ဦး ကပ်လျက်ခုံတန်းရှည်လည်းရှိပါတယ်။
သို့သော်လည်းအဘယ်အရာကိုသင်၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မယ်အများဆုံးဖြစ်ကြသည် votive ကျောက်စာ ဤရေချိုးကန်များသည်မိမိတို့အချိန်၌ရှိခဲ့သင့်သည့်အရေးကြီးပုံကိုစိတ်ကူးတစ်ခုပေးသောရောမတာရာရာကို၏အရေးကြီးသောကိန်းဂဏန်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ရုံ Caldes မှဝင်ရောက်ခွင့်မှာတူညီတဲ့ကာလကနေတံတားလည်းမရှိ။
Caldes de Motbui ၏အတိတ်ကသက်သေသည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားသောဤတံတားဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်လည်ပတ်လျှင်သင်လမ်းလျှောက်ရန်အခွင့်အရေးယူနိုင်သည် ရယ်မောခြင်း ကအောက်မှာပြေး။ ၎င်းသည်သင့်အားလှပသောရှုခင်းများကိုလှပစေမည့်အရေးကြီးသည့်ဂေဟစနစ်တန်ဖိုးရှိသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သငျသညျလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ရှုခင်းများကိုမြင်ချင်လျှင်သို့သော်, Catalan မြို့၏ဤရပ်ကွက်အတွင်းသွားရောက်ကြည့်ရှု။ ၎င်းသည်၎င်း၏ထွက်ပေါက်တွင်တည်ရှိပြီးသာယာလှပသောအိမ်များရှိသည်။ ဒါပေမယ့်အရေးအကြီးဆုံးအရာက၊ သစ်တော ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဝန်းရံထားတာကအံ့သြစရာကောင်းတဲ့နေ့တွေမှာမင်းမြို့ကိုကြည့်ရတာသဘာဝအံ့ wonder စရာပါ ဘာစီလိုနာ, Tibidabo နှင့်မြေထဲပင်လယ်ပင်။
သင်သည်ဤပန်းပုဆရာ၏ပြတိုက်သို့သွားသင့်ပြီးအကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများအနက်မှတစ်ခုလည်းဖြစ်သည် ပီကာဆို။ ဒီခင်မင်ရင်းနှီးမှုကဒီအဆောက်အအုံများကို Malaga ပါရမီရှင်၏အရေးပါသောပန်းချီကားများဖြစ်သောHugué၏လက်ရာများနှင့်အတူနေထိုင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
Caldes de Montbui ရှိရာသီဥတု
ကက်တလန်မြို့၏ရာသီဥတုမှာအမျိုးအစားဖြစ်သည် မြေထဲပင်လယ်, အတွင်းပိုင်း၏areaရိယာကြောင့်မသိမသာကွဲပြားပေမယ့်။ ထို့ကြောင့်ရှည်လျား။ တိမ်ထူ။ အေးမြသောဆောင်းရာသီများကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။
သို့သော်ရာသီဥတုသည်အလွန်သာယာသည်။ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် ၃၀ ဒီဂရီထက်မပိုသောကြောင့်။ နိမ့်ဆုံးများအနေဖြင့်၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်နှစ်ခုထက်မနည်းပါ ဤအမှုအလုံးစုံအရ, Caldes သွားရောက်လည်ပတ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်များဖြစ်ကြသည် နွေ ဦး နှင့်နွေရာသီ.
Caldes de Montbui မှာဘာစားရမလဲ
Caldes ၏ gastronomy သည်ဘာစီလိုနာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးနှင့်ဆင်တူသည်။ သို့သော်မြို့ငယ်လေးတွင်အချို့ရှိသည် ဒေသခံထုတ်ကုန်များနှင့်ကိုယ်ပိုင်ဟင်းလျာများ.
ယခင်သည် ချယ်ရီသီး, သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥယျာဉ်၌စိုက်ပျိုးနှင့်သင်အထူးအရသာသတိထားမိပါလိမ့်မယ်အရာ။ ၁၈ ရာစုကတည်းက Caldes တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်ဟင်းချိုခေါက်ဆွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ထပ်တူပြောနိုင်သည် miel နှင့်ဝက်အူချောင်း, အထူးသဖြင့် longanizas နှင့်ဝက်အူချောင်း။
ဟင်းလျာတွေအတွက်အချိုပွဲနှစ်ခုကိုစမ်းကြည့်ချင်တယ်။ အခြားတဖက်တွင်မူ, carquinyolis ၎င်းတို့သည်ဗာဒံနှင့်လုပ်ထားသောခြောက်သွေ့သောမုန့်များဖြစ်ပြီးအရသာရှိပါသည်။ နှင့်အညီ, အခြားအပေါ် အသတ်ခံရဆိတ်သို့မဟုတ်သိုးနွားနို့နှင့်ပြင်ဆင်ပြီးထိပ်ပေါ်မှာပျားရည်နှင့်အတူလုပ်သောလတ်ဆတ်တဲ့လက်မှုပညာဒိန်ခဲ။
ပိုပြီးစပ်စုသည် la Calderinaအပူရေကိုပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုသောကြောင့် Catalonia တွင်ထူးခြားသောယာဉ်ဘီယာဖြစ်သည်။ ပြီးတော့မင်းရဲ့အစားအစာပြီးအောင်တစ်ခွက်ကိုစမ်းကြည့်ပါ taronja anise (ကာတာလန်၌ "လိမ္မော်ရောင်") ။
ဘာစီလိုနာမြို့ကိုသွားဖို့သင်စီစဉ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုသင်စိတ်ဝင်စားဖို့စိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မယ် ပွဲတော်များ သူတို့ကအောက်တိုဘာရဲ့ဒုတိယအပတ်ဖြစ်တယ်။ အောက်ပါတနင်္ဂနွေနေ့တွင်သာဖြစ်သည် အဆိုပါ Capvuinada, လက်မှုပညာဆိုင်ခန်းများနှင့် float နှင့်စပျစ်သီးကိုကားတစ်ချီတက်ပွဲနှင့်အတူ။
၎င်းတို့သည်သက်ဆိုင်ရာအားလပ်ရက်များလည်းဖြစ်သည် San Antonio တွင် Abad ၏ဒီသူတော်စင်ရဲ့နေ့ကအောက်ပါတနင်္ဂနွေကျင်းပလျက်, က San Sebastián၏ဘုရားဖူးမေလပထမ၊ မေလလည်းချယ်ရီသီး၏အစာအိမ်နှင့်ဆိုင်သောရက်ပေါင်း; Corpus Christi ပွဲတော် ပန်းထဲမှာ Caldes, အ နဂါးငွေ့တန်း ဇူလိုင်လဒုတိယစနေနေ့တွင်ကျင်းပသောမီးနှင့်ရေပွဲတော်။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ Caldes က de Montbui သင့်အားကမ်းလှမ်းရန်အရာများစွာရှိသည်။ အကယ်၍ သင်မသိလျှင်၊ ဤမြို့ငယ်လေးသို့သင်သွားရောက်လည်ပတ်ရန်သင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံတွေ၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနအကြွင်းအကျန်တွေ၊ အလွန်လှပတဲ့ရှုခင်းများ၊ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ gastronomy နဲ့ကြိုဆိုတဲ့လူ ဦး ရေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ယေဘုယျ » Caldes က de Montbui